कारुणिक गित “बिधुवा” बजारमा – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. कारुणिक गित “बिधुवा” बजारमा – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
कोरोनाका कारण सरकारले लक् डाउन गरेको बेला जुम्लाको पर्यटकीय स्थल सिञ्जामा पुगेर भिडियो निर्माण गरिएको हो । गितले दर्सक तथा श्रोताहरुको मन जित्नेमा बिश्वकर्मा ढुक्क छन । मौसम प्रतिकुल भैदिदा भिडियो निर्माण गर्न एक हप्ता लागेको भिडियोका निर्देशक पदम बिन्दास रोकाएले जानकारी गराए ।
भिडियो रोकाए आफैले खिचेका हुन् भने सम्पादन मिन रावल गरेका छन् । आफुले माया गरेको मान्छेको अचानक मृत्यु भएपछि जिबनमा आउने भोगाइलाई गित तथा कथाले बोकेको छ । भिडियोमा गोमान सिङ्ग सार्की र निरु आरसी को अभिनय हेर्न सकिन्छ भने बाबा इन्टरटेन्मेन्ट टिभीले उत्पादन तथा बजार ब्यबस्थापन गरेको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको २७ फाल्गुन २०७७, बिहीबार March 11, 2021 627 Viewed